सिक्किम जैविक क्रान्ति जस्तै अर्को क्रान्तिको प्रतिक्षा : डाक्टर मिचुङ भोटिया - Sikkim News | Sikkim Breaking News | Trending News
Home/Trending/Latest News/सिक्किम जैविक क्रान्ति जस्तै अर्को क्रान्तिको प्रतिक्षा : डाक्टर मिचुङ भोटिया
सिक्किम जैविक क्रान्ति जस्तै अर्को क्रान्तिको प्रतिक्षा : डाक्टर मिचुङ भोटिया
आज कै दिन अर्थात् 18 जनवरी 2016को दिन सिक्किमलाई जैविक राज्य घोषणा गरेको थियो। सम्पूर्ण सिक्किमेली सन्तानलाई छैटौं जैविक वार्षिकीको शुभकामना अनि बधाई।
एस डि एफ सरकारको पहलले सिक्किमलाई विश्व कै जैविक मानचित्रमा हालेको दिन। सिक्किमको निम्ति गर्व गर्ने दिन। हामीले कोरेको सिक्किमको नयाँ पहिचान: जैविक राज्य।
त्यही वर्ष अर्थात् १ जनवरी २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रले Sustainable development Goals (SDG goals) नामकरण गरी १७ वटा लक्ष्य राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बिकासलाई माप्ने घोषणा पनि गर्यो।
आज बिहान यही गर्वको दिनलाई फर्केर हेर्दै थिए। भारतको नीति आयोगले २०२१ मा उत्तर पूर्वीय राज्य माथि गरिएको SDG लक्ष्य माथिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले म यही रिपोर्ट हेर्दैछु।
सिक्किमको चार वटा जिल्ला, प्राय सबै लक्ष्यमा हरियो रंगमा देखा पर्छ। हरियोको अर्थ अति राम्रो प्रगति। गर्व लाग्यो।
२०१६ मा सुरु भएको SDG गोल माथिको एस डि एफ सरकारको कामको3 परिणाम हो यो। मलाई गर्व छ पवन चाम्लिङ्गको सिक्किमेली जनताको प्रगति, स्वास्थ्य अनि समृद्धि प्रतिको प्रतिवद्धता माथि। असल व्यक्ति, भिजेनेरी नेता, कुशल प्रसाशक हुन चाम्लिङ।
जैविक खेती विकास, SDG गोलको एउटा अंग बन्यो। हामी विकसित राज्य मात्र होइन विकसित देशका नेताहरु संग मंच साझा गर्ने भारतको एक मात्र राज्य बनेका थियौं। एस डि एफ सरकारले १७ लक्ष्य प्राप्त गर्न युद्द स्तरमा पहल सुरु गरेको हो।
२०१४ मा लोनली प्लानेटले सिक्किमलाई ” पर्यटनको निम्ति श्रेष्ठ पर्यटक राज्य” भनी घोषणा गरेको थियो।
सिक्किम विकशित देश संग काँधमा काँध मिलाएर राज्यलाई प्रगति पथमा लैजाने सिँढीमा उक्लेको समय थियो, एस डि एफ सरकारको समय। आज सिक्किममा साँप सिँढी खेलमा ९९ मा पुगेर, झ्वाम्म १९ मा झरेको नै भएको छ सिक्किमको बिकास। सिक्किमका भोटर ले भूल गरेकै थियो??
विकासको कुरा गर्दा मलाई याद आउँछ, सिक्किममा वैचारिक विकासले उडान भरेको थियो। बौद्धिक पक्ष खुलेर अघि आउँथे। बोल्ने छुट थियो। केवल राजनीतिको कुरा गरेको होइन। हाम्रा बौद्धिकहरु श्रोत व्यक्ति बनी कहाँ कहाँ पुग्थे। सेमिनार, विचार मन्थन, साहित्यिक गोष्ठी सिक्किमलाई मलिलो बनाउने वातावरण।
आजको वातावरण हेर्दा मलाई चिन्ता लाग्छ।
आज जैविक दिवस। सिक्किमले सुरु गरेको जैविक क्रान्तिको हालखबर कस्तो छ? SDG गोल प्राप्तिको निम्ति के कस्तो पहलहरु आज क्रान्तिकारी सरकारले आफ्नो योजनामा हालेको छ? कुन कुन पहलहरुलाई कार्यमा परिणत गर्न पर्याप्त अर्थ आवन्टन गरिएको छ?
क्रान्तिकारी मोर्चाको निम्ति क्रान्ति भनेको ढुङ्गा मुढा गर्नु, जिन्दाबाद मुर्दाबादको नारा लगाउनमा मात्र सीमित भयो। विकासको क्रान्ति उनीहरूको शब्दकोशमा छैन।
खोई विचारको आदान प्रदान? राज्य भन्छौ तर सिक्किमलाई एउटा जिल्लामा परिणत गरिसक्यो, क्रान्तिकारी मोर्चाले। प्रगतिको कुरा किन हुँदैन? राजनैतिक बहस किन हिंसामा परिणत हुन्छ? कृषकहरु किन किनारकृत बनेका छन्? व्यापार वाणिज्य कसरी घट्दैछ? शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था किन ध्वस्त हुँदैछ?
जसरी एस डि एफ सरकारले सिक्किममा बौद्धिक क्रान्ति, जैविक क्रान्ति सुरु गरेर सिक्किमलाई विश्व मानचित्रमा उभिने बनायो, अब फेरि त्यही क्रान्ति सिक्किमलाई चाहिएको छ। सिक्किमले एकपल्ट अन्जानमा भूल गरेको छ। सिक्किमेली जनताले फेरि त्यो भूल दोहोर्याउने छैन। सिक्किमेली युवा जिन्दाबाद अनि मुर्दाबादको नारा लगाउने मात्र युवा होइनन्। यहाँको युवा वैचारिक क्रान्तिमा विश्वास राख्छन्, समृद्धिमा आस्था राख्छन।
अब सिक्किमले फेरि सचेत भएर सोच्नु पर्छ। सिक्किम जैविक क्रान्ति जस्तै अर्को क्रान्तिको प्रतिक्षामा !!!